पार्टीमा लागेको दाग मेटाउन वामसँग सुनौलो अबसर
प्रकाशित: २०७४ माघ ११ , १०:२६ बजे
२००७ साल अगाडी हाम्रो देशका राजनेता र राजनेतिक पार्टीमा निरङ्कुशतन्त्र विरुद्ध र प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको पक्षमा राजनिति सुरु गर्ने कुरामा २० वर्षभन्दा बढीको अनुभव थिएन् । किनभने विक्रम सम्वत १९८८ सालमा प्रचण्ड गोर्खा नामको र विक्रम सम्वत् १९९३ सालमा नेपाल प्रज्ञा परिषद नामको राजनितिक संगठन खुलेका हुन् । त्यसपछि नेपालभित्र पनि र भारतमा पनि नेपालमा अरु राजनितिक पार्टीहरु खुलेका हुन् । अनि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भएपछि नेपालमा राणाशासन विदा भई प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । त्यसैले अहिलेसम्मको आधुनिक राजनितिक यात्रामा नेपालीको अनुभव जम्मा ६ दशकको भयो भन्नुपर्छ ।
त्यसैले पनि हुनपर्छ । हाम्रो समग्र राजनितिक नेतृत्वमा अहिलेपनि अनेक आत्मकेन्द्रीत विचार, विश्वास, मनोभावना, हीनकारक महत्वकांक्षा, संक्रिणता बराबर हुँदा उनिहरु आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेका देखिदैनन् । त्यसैले हुनुपर्छ जब–जब उनका विपक्षीका शत्रुले सत्ताबाट लखेटी आफ्नो अस्तित्व नै मेटीदिन खोज्छन् । त्यस बेल ती बाध्य भएर आपसमा संगठीत हुन्छन् । संर्घष गर्छन र आफ्ना शत्रुलाई हराउँछन् पनि । तर जब उनिहरुले देश, जनता, आफ्नै कर्तव्य पुरा गर्नमा असफल भएका पाइन्छन् । नत्र भने १ सय ४ वर्षे राणाशासनलाई ढाल्ने सबै एकतन्त्र, निरंकुशतन्त्र विरोत्री राजनितिक पार्टीहरु राजा महेन्द्रको २०१९ साल पुस १ गतेको शिकार हुने थिएनन् ।
त्यस्तै २०४६ साल चैत २६ गते ३० वर्षे महेन्द्र र बिरेन्द्र शासनलाई पछार्ने प्रजातन्त्रवादी/लोकतन्त्रवादी नेता र पार्टीहरुले फेरी विक्रम सम्वत् २०५९ साल असोजदेखि २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रलाई शक्तिहीन बनाई विक्रम सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गराउन सक्ने नेताहरुले २ वर्षको सद्धा ४ वर्षसम्म चालु संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने मौका पाए पनि आखिर संविधानै नबनाई संविधानसभाको विद्यान गर्ने थिएनन् ।
यसबाट एउटा अति समान्य र सरल तथ्य के बुझिन्छ भने नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरु तिनका नेताहरु र तिनले जनतामा प्रस्तुत गरेका आर्दशले अझसम्म पनि नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रलाई बलियोसीत संगठीत र मर्यादित बनाउन सकेका छैनन् । तसर्थ तिनले जति सुकै चर्का भाषण गरे पनि र आकाश पातालको फूर्ति लगाए पनि तिनले आम जनताको विश्वास जित्न सकेका छैनन् । त्यसैले देश एकातिर रोइरहेको छ जनताहरु अर्कोतिर हाहाकार गरिरहेका छन्. । तर देहमा जति धेरै पार्टीहरु र नेताहरु भए पनि तिनले देश र जनतालाई भरपर्दो र चिक्त बुझ्दो किसिमले एक शुत्रमा गास्न सकेका छैनन् ।
एक पटक फेरी नेपाली जनताले वाम गठबन्धन माथि आश लगाएको छ । हुनत नेपाली जनतासँग आश लगाउनु भन्दा अरु कुनै बिकल्प छैन् । नेपाली जनताको विश्वास त नेपालका पार्टीहरु ७० वर्षदेखि खेप्दै आएका छन् । ७ दशक लामो नेपालको राजनितिक इतिहासमा एउटा सरकार पनि पाँच वर्षे चलाउन सकेका छैनन् । कुनैपनि नपार्टीले ७ दशक लामो यो इतिहासमा एउटा पाँ वर्षे स्थीर सरकार नेपाललाई दिन सकेका छैनन् । यस पटक नेपाली जनतले नेपाल कम्निष्ट पार्टीहरु एक भएको देखेर पक्कैपनि केही गर्छन भन्ने आश नेपालका कम्निष्ट नेताहरुमा लगाएका छद्धन ।
वाम गठबन्धनलाई बहुमत मिलेको छ । नेपालको लगभग ७ दशक लामो राजनितिक पाटीबेश देखेर नेपालका राजनितिक पार्टी अनि तिनका गतिविधिबाट जनताको आश मरिसकेको छ । यस ७ दशक लामो इतिहासमा कुनै पनि पार्टीले एउटा दिर्घकालिन सरकार र जनताको मन छुने काम जनताको कल्याणको निम्ती अग्रसर नभै आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पुक्र्तीक ागर्न शक्तिमा पुग्ने र शक्तिको दुरपयोग गर्ने भएकाले नेपालका पार्टीहरु र नेताहरुले देश र जनतालाई भरपर्दो र चित्त बुझ्दो किसिमले एक सुत्रमा गास्न सकेका छैनन् । यस ७ दशक लामो इतिहासमा धेरै सरकार बने कुनै सरकारले कार्य गर्न चाहेनन् भने कुनै सरकारलाई काम गर्न दिइएन् ।
यसबिच थुप्रै घटनाहरु धेरै थुप्रै पार्टीहरु स्थापना भए तर कसैले पनि जनताको चित्त बुझाउन सकेनन् । यसरी मरिसकेको आशामा एक चोटी फेरी पालुवा लाग्यो । सबै एक चोटी फेरी वाम गठबन्धन भरोसा गरे र वनलनई बहुमत मिलेको छ । अब सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशा वामगठबन्धन माथि छ । के वाम गठबनधनले नेपाली जनताको मरिसकेको आशालाई पनरजिवन दिज सक्लान त ? के नेपाली जनताले गरेका विश्वास र नेपाली जनताको मतको कदर गर्न सक्लान त ?
वाम नेताहरुले के पद र पार्टी भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रीयता र जनकल्याणलाई प्राथमिकता दिन सक्लान त ? यि तमाम प्रश्नहरु आज हरेक नेपाली जनताको मनमा गुन्जिरहेका छन । ७ दशक लामो नेपाली राजनितिक इतिहासमा लागेको दागलाई मिटाएर पद र पार्टी भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रियता अनि जनकल्याणको निम्ती एउटा स्थाही सरकार दिएर देशबाट सधैका लागि अस्थीरको अनत्य गर्ने र नेपाललाई समृद्धितिर ढाल्ने जिम्मा आज वाम गठबन्धनको काधमा छ । यस जिम्मेवारीलाई विश्वासका साथ पुरा गरी इतिहास रच्ने अबसरबाट वाम नेताहरुले पर हट्न मिल्दैन ।